Eleven Media Group မှ သတင်းသမားသုံးဦးအား ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ရုံးထုတ်လာစဉ် / မျိုးမင်းစိုး / ဧရာဝတီ
By ဇူးဇူး 17 October 2018
Weekly Eleven ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော ဖြိုးဝေ၏ ဆောင်းပါးပါ အချက်အလက်များ မှန်ကန်မှု မရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်ခိုင်က ယနေ့ တရားခွင်တွင် ထွက်ဆိုသည်။
နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) ဖြင့် Weekly Eleven အယ်ဒီတာချုပ် ဦးကျော်စိုးလင်း၊ တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာ ဦးနရီမင်းနှင့် သတင်းထောက်ချုပ် ဦးဖြိုးေ၀၀င်းတို့ကို တာမွေမြို့နယ်တရားရုံး၌ ပထမဆုံးအကြိမ် ရုံးထုတ် စစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်သည်။
အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်ထုတ် Eleven ဂျာနယ်တွင် ပါရှိသော ဆောင်းပါးရှင် ဖြိုးဝေ ရေးသားထား သည့် “အမြဲရှုံးနေတဲ့ စက်သုံးဆီဆိုင်တွေ ပိတ်ရေး၊ ငွေချေးသူ ဘယ်သူမှန်းမသိတဲ့ ကျောင်းကားနဲ့ လူနာမည်ပေါက် ပြည်သူ့ရှယ်ယာ” ဆောင်း ပါးတွင် ပါရှိသော “ပြည်သူ့ငွေသုံးထားတဲ့ ကုမ္ပဏီက လူနာမည်ပေါက် ရှယ်ယာ” ခေါင်းစဉ်ခွဲပါ အချက်အလက်များ ကို အဓိက ကိုးကား၍ တရားစွဲဆိုထား ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရားလိုဖြစ်သူ တိုင်းအစိုးရရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်ခိုင်က “ဆောင်းပါးရှင် ဖြိုးဝေ ရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ အချက်အလက်တွေဟာ မှန်ကန်မှု မရှိပါဘူး” ဟု တရားခွင်၌ ထွက်ဆိုသည်။
ဆက်လက်၍ ၎င်းက တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းထားသည့် Yangon Metropolitan Development Public Co.,Ltd ကို အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြား မှု ဦးစီးဌာနတွင် ၈. ၃. ၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် အမှတ် ၅၅၃၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ (ရက) ဖြင့် ဖွဲ့စည်း မှတ်ပုံတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
“ဦးမြင့်သောင်း(တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး) သည် အစိုးရကိုယ်စား ကုမ္ပဏီတွင် ရှယ်ယာဝင်ပေး ထားရခြင်း ဖြစ်၍ ဦးမြင့်သောင်း နာမည်အောက် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာများ ထည့်ဝင်ထား ခြင်း မဟုတ်ပါ။ လူနာမည်ပေါက် ရှယ်ယာဝင်ထားခြင်း မဟုတ်ပါ” ဟု ဦးအောင်ကျော်ခိုင်က ထွက်ဆို ခဲ့သည်။
ဆောင်းပါးရှင်၏ မမှန်မကန် ဖော်ပြ ရေးသားဖြန့်ချိမှုကြောင့် တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း၍ အစု ထည့်ဝင်သူ မြန်မာ့ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အစုရှယ်ယာဝင်များ၏ စိတ်တွင် ထိတ်လန့်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ထူထောင်ထားသော ကုမ္ပဏီကို အများပြည်သူ အယုံအကြည် ပျက်စေခြင်းတို့ ဖြစ် စေသည့်အပြင် တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကို ပြည်သူများက အကြည်ညိုပျက်ပြီး အယုံအကြည်မဲ့ကာ အများပြည်သူက အစိုးရကို ပြစ်မှုကျူးလွန် လာအောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်၍ ယခုကဲ့သို့ ဦးတိုက် တရားစွဲဆိုရခြင်းဖြစ်ကြောင်း အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်က ထုတ်ပြန်ထားသည့် တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်းပင် တရားလို ဦးအောင်ကျော်ခိုင်က ယနေ့တရားခွင်၌ ထွက်ဆိုသည်။
တရားစွဲဆိုခံရသူ ဖြိုးဝေဝင်းက “လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ။ ဒေါ်စန္ဒာမင်းတို့၊ ဦးကျော်ဇေယျတို့ ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ။ ကျနော် အမှားမပါခဲ့ဘူး” ဟု တရားခွင်အပြီးတွင် ပြောဆိုသွား သည်။
ယနေ့ ရုံးချိန်းတွင် စွပ်စွဲခံရသူများဘက်မှ ကိုယ်စားလှယ် ပါဝါတင်ခြင်း၊ အာမခံ လျှောက်ထားခြင်း၊ အာမခံ လျှောက်ထား မှုအပေါ် နှစ်ဖက် လျှောက်လဲချက်ပေးခြင်းနှင့် တရားလို စစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
စွပ်စွဲခံရသူများ၏ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေ ဦးကြီးမြင့်က “စွပ်စွဲခံရသူတွေဟာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မယ့် သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ လူကြီးလူကောင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးတိုက်လျှောက်ထားပြီးနောက် ဖမ်းဝရမ်း ထုတ် ချက်ချင်းဖမ်းခဲ့တဲ့အတွက် ဘာမှ ပြင်ဆင်ချိန် မရလိုက်ဘူး။ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေလည်း မလွှဲခဲ့ရ ပါဘူး။ သူတို့ဟာ သတင်းစာတိုက်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ခြွင်းချက်မရှိ အာမခံ ပေးသင့်ပါတယ်” ဟု တရားခွင်တွင်း လျှောက်ထားသည်။
ဆက်လက်၍ ၎င်းက ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) မှာ အာမခံမပေးနိုင်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသော်လည်း ရာဇဝတ်မှု မဟုတ်ခြင်း၊ ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်သာ ချမှတ်နိုင်ပြီး သေဒဏ်၊ တကျွန်းဒဏ် ထိုက်သင့်သည့် ပုဒ်မမျိုး မဟုတ်သည့်အတွက် ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၉၇ ပုဒ်မခွဲ ၁ အရ အာမခံ ပေးခွင့်ရှိကြောင်း အခြားအလားတူ အမှု ၂ ခုကို နမူနာပေး၍ တရားရုံးသို့ လျှောက်ထား သည်။
ရုံးချိန်းကို အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်သို့ ပြန်လည် ချိန်းဆိုထားပြီး စွပ်စွဲခံရသူဘက်မှ အာမခံ လျှောက် ထားမှုအပေါ် တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်မည်ဖြစ်ကာ တရားလိုဖြစ်သူ ဦးအောင်ကျော်ခိုင်ကိုလည်း ဆက်လက် စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန် – Eleven သတင်းသမား ၃ ဦး နိုင်ငံတော် အကြည်ညို ပျက်စေမှု ပုဒ်မဖြင့် တရားစွဲခံရ
Topics: Eleven ရုံးထုတ်